LG G3 nsogbu, aghụghọ abụọ iji melite arụmọrụ nke LG G3 | Gam akporosis
LG G3 Nsogbu: Usoro abụọ iji melite arụmọrụ LG G2 na-enweghị mgbọrọgwụ
Pablo Aparicio | | Gam akporo Root, LG, Nkuzi
Ọzọkwa anyị kwesịrị kelee ụmụ okorobịa na ndị mmepe XDA, nke n'ụzọ enweghị mmasị na-ewetara anyị azịza nye nsogbu ndị kachasị emetụta na anyị nwere ike ịhụ na ngwaọrụ anyị ogologo oge tupu ụdị ndị ahụ.
N'okwu a, m ga-ewetara gị azịza abụọ maka melite arụmọrụ nke LG G3 na-enweghị ịbụ ndị ọrụ mgbọrọgwụ. Ihe ngwọta nke ga-ekwe anyị rụọ ọrụ ihie ka kacha na-enweghị na-agaghị emeli site na okpomọkụ, na ọzọ, nke ga-ekwe ka anyị kpochapu ihe ojoo ojoo nke LG G3 nwetara mgbe ọ malitere ikpo ọkụ, nke ahụ bụ n'ihi na ọgbọ ndị a kachasị ọhụrụ nwere ọtụtụ akụ, gazillion puku pixel ese foto na ndekọ 4k, ọ bụrụ na ị maghị, ha na-ekpo ọkụ nke ukwuu.
Nke mbu, m ga - adọ gị aka ná ntị na ọ bụ ezie na ụmụ okorobịa si XDA na nzukọ ha na - akọwa nke ahụ ọ bụ usoro nchekwa zuru oke, Ekwesịrị m ịgwa gị na ọ nweghị ọnụ ọnụ ụgbọ mmiri abụọ ahụ bụ otu, ọ bụ ezie na ha bụ otu akara na ụdị. Iji nke a ka m chọrọ ịgwa gị nke ahụ atụla egwu ịme ihe abụọ a na m ga-enye gị ọzọ, ọ bụ ezie na etinyere ya, ị ga-amata ebe njedebe gị ma hụ na ọ naghị ekpo oke ọkụ. Mgbe m kwuru oke, m na-ekwu na ọ naghị ekpo ọkụ karịa ka ọ na-ekpo ọkụ ugbu a, n'ọnọdụ ahụ, ị ​​ga-agbanwe usoro ahụ, na-ahapụ ihe niile dịka ọ dị na mbido ma edozi okwu ahụ.
1 Ntuziaka mbụ ma ọ bụ Mod, otu esi eme ka ncha ọkụ ruo na oke na-enweghị oke okpomọkụ
2 Nke abụọ n'ọnụ ma ọ bụ Mod, esi zere lag mgbe ọnụ ọkọkpọhi ọkụ
3 LG G3 m malitegharịrị n'onwe ya
4 LG G3 na-agbanyụ onwe ya
4.1 Tinye batrị azụ
4.2 Gbanyụọ ọrụ ebe
4.3 Melite LG G3 sistemụ arụmọrụ
4.4 Wepu SD kaadị
4.5 Weghachi ngwaọrụ
5 Nsogbu batrị?
6 LG G3 m na-ekpo ọkụ
7 Zụta batrị maka LG G3
Ntuziaka mbụ ma ọ bụ Mod, otu esi eme ka ncha ọkụ ruo na oke na-enweghị oke okpomọkụ
Anyị na-abanye dialer nke LG G3 anyị ma kaa akara koodu a ga-egosipụta menu ọrụ nke anyị ga-esi rụọ ọrụ mods abụọ ahụ m ga-agwa gị ọzọ;
Koodu ịpị bụ 3845 # * 855 #, ozugbo akara, a na ihuenyo ọrụ ga-egosipụta ebe anyị ga-ele anya maka nhọrọ Elu okpomọkụ Ngwongwo Gbanyụọ na anyị rụọ ọrụ ya site na ịpị ya. Ozugbo emere nke a, anyị ga-amalitegharị ọnụ ya na-agbanye ya kpamkpam na ichere obere oge ma ọ bụ karịa tupu ịgbanwuo ya, ozugbo anyị gbanwuru ya wee gosipụta mkpọchi mkpọchi ma ọ bụ ihuenyo PIN, anyị ga-ahapụ ya zuru ike na-enweghị imetụ ihe ọ bụla ọzọ nkeji, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịmeghe ya ma debe PIN nkeonwe.
Site na aghụghọ a anyị nwetara na nchachaghị ebelata ozugbo ngwa ahụ chọpụtara na ọ na-amalite ikpo ọkụ.
Nke abụọ n'ọnụ ma ọ bụ Mod, esi zere lag mgbe ọnụ ọkọkpọhi ọkụ
para gbochie processor ọsọ na-na budata belata Mgbe ọnụ malitere ịmalite ikpo ọkụ, na-akpata Lag nke ọtụtụ mmadụ na-ekwu maka LG G3, anyị ga-ejigharị koodu mbụ wee lelee na menu ntọala zoro ezo egosiri anyị, nhọrọ Kwes Daemon Mgbochi Gbanyụọ, nke anyị ga - enwe, dịka anyị mere na mbụ, rụọ ọrụ site na ịpị ya.
Dị ka nhọrọ maka rụọ ọrụ ihuenyo ihie enweghị okpomọkụ na-agaghị emeli, anyị ga-amalitegharịa ọnụ site na ịgbanyụ ya kpamkpam ma chere obere oge tupu anyị agbanye ya, n'otu aka ahụ, ozugbo agbanwuru anyị, anyị ga-ahapụ ya nkeji ọzọ na-enweghị imetụ ihe ọ bụla ma ọlị, ọbụlagodi na emegheghị ihuenyo ahụ ma ọ bụ tinye koodu PIN anyị.
Abụọ ndị a dị mfe aghụghọ anyị ga-enwe nke anyị LG G3 na nchapụta kachasị na-enweghị mbenata oge ọ bụla ị hụrụ oke okpomọkụ, yana nkịtị ọsọ nke anyị processor quad-isi na-enweghị ikpo oke ọkụ.
Imecha-agwa gị na ndị a Koodu nwalere m n'onwe m na LG G3 ọnụ nke nwunye m na ha na-arụ ọrụ zuru oke, nke mere na achọpụtaghị m kpo oku dị elu karịa ọnụahịa ahụ nwere tupu ịgbalite Mods ndị a.
Iji mechaa gwa gị na ugbu a, anyị nwere usoro aghụghọ abụọ a iji nweta ihe na LG a dị egwu karịa na mmelite kachasị ọhụrụ natara, ụlọ ọrụ ahụ agbachaala nke ọma. Ka anyị nwee olileanya na ha ga-arụ ọrụ wee dozie ya na nwelite ọzọ site na OTA ozugbo enwere ike.
Cheta na: Koodu egosiri ebe a bu arụ ọrụ maka LG G3 mba nlereanya D855Iji nweta koodu dị iche iche maka ụdị LG G3 ndị ọzọ, gafee usoro XDA nke gọọmentị.
LG G3 m malitegharịrị n'onwe ya
Karịa LG reboot onwe ya O nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe, ọtụtụ n'ime ha dabara na blackouts na-enweghị usoro. Mana anyị nwekwara ike ịnwale azịza anyị chọtara na ọgbakọ AT&T:
Anyị na-emeghe Playlọ Ahịa Google.
Anyị na-emetụ Nchịkọta / ngwa m aka. Ngwa ndị nwere mmelite dịnụ ji akara "Mmelite".
Anyị na-emetụ aka na Ọrụ Google Play.
Anyị metụ NchNhr wee lelee igbe dị n'akụkụ Nwelite onwe ma ọ bụ "Nwelite onwe."
Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, ezigbo echiche ga - eme site na isi ihe a kọwara na ngalaba na - esote: "LG G3 na - agbanyụ onwe ya".
LG G3 na-agbanyụ onwe ya
Otu nsogbu anyị nwere ike ịchọta na LG G3 anyị bụ na ọ na-ekpebi mechie onwe ya mgbe ọ ka nwere ike batrị. Ọ bụrụ na anyị na-enwekarị nsogbu a, anyị nwere ike idozi ya site n'ime ihe ndị a:
Tinye batrị azụ
Ọ nwere ike iyi nzuzu, mana anyị ga-ewepụ ohere niile. Na ngwaọrụ gbanyụrụ nwere ike ịbụ n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke batrị ya, na ihe mbụ anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na batrị bụ mbughari bụ itinye ya n'ụzọ dị emela ezi kọntaktị. Nke a bụ ihe kachasị mfe ịlele, yabụ anyị ga-ewepụ batrị ahụ, anyị ga-etinye ya na nyocha na ihe niile dị ebe ahụ, anyị ga-enyocha ma edozila nsogbu anyị.
Gbanyụọ ọrụ ebe
E nwere ọrụ ndị kọrọ na ha jisiri ike izere akpaka blackouts na dị nnọọ gbanyụọ ọrụ ebe nke LG G3. Iji mee nke a, anyị ga -
Anyị na-emeghe ntọala ngwaọrụ.
Anyị metụrụ Ọnọdụ aka.
Anyị gbanyụọ ngbanwe ahụ.
Buru n'uche na, ọ bụrụ na anyị emee nke a, anyị agaghị enwe ike inweta ọnọdụ anyị na mkpanaka anyị, nke, dịka ọmụmaatụ, ga-egbochi anyị iji GPS ọ bụla ma ọ bụ dekọọ ọrụ anyị na Strava ma ọ bụ ngwa egwuregwu ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ụzọ anyị gara, na-agbakọ ọsọ, wdg, ka ọ bụrụ nke ziri ezi.
Melite LG G3 sistemụ arụmọrụ
Mgbe LG chọpụtara banyere nsogbu G3 enweghị nsogbu, weputara mmelite Akụrụngwa, ya mere imelite ekwentị nwere ike idozi nsogbu anyị. Anyị na-eme ya:
Ka anyị gaa na ntọala.
Anyị na-enweta na «Banyere ngwaọrụ».
Anyị na-emetụ Mmelite Software na, ọ bụrụ na mmelite dị, anyị na-etinye ya ebe a.
Wepu SD kaadị
Mgbe ụfọdụ kaadị SD adịghị mma nwere ike ibute nsogbu. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị, mana, dị ka batrị ahụ, anyị nwere ike ịnwa iwepu kaadị SD ma lelee ma nsogbu ahụ apụla na ya.
Dị nnọọ ka kaadị SD adịghị mma nwere ike ibute nsogbu, sọftụwia mebiri emebi nwekwara ike ibute nsogbu. Site na "emerụ" anyị apụtaghị na agbanwere ya, mana na ihe anaghị arụ ọrụ otu o kwesiri. Omume nke nwere ike idozi ọtụtụ nsogbu bụ iweghachi ngwaọrụ ahụ, ihe anyị ga - enweta site na isoro usoro ndị a:
Anyị na-aga Ọnụ Ntọala.
Anyị na-enweta na Ndabere na Tọgharia.
Anyị gbara bọọlụ Ableghaghachị nke akwa.
N'ikpeazụ, anyị pịa OK iji kwado.
Onweghi ihe dịka ezigbo sekit dị mkpụmkpụ iji kpalite ịgbaji. Na LG G3 anyị enweghị usoro nwere ike ịbụ n'ihi a ọjọọ batrị, ya mere ezi ihe ga-enyere gị aka ịgbanwe ya.
Tupu ịgbanwe ya, ee o nwere onye anyị maara na LG G3 ọzọ, anyị nwere ike lelee ma batrị gị ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ anyị. Ọ bụrụ na ọ mee, anyị mara na nsogbu dị na batrị anyị na na ihe ngwọta ya bụ ịgbanwe ya maka nke ọhụrụ.
LG G3 m na-ekpo ọkụ
Nsogbu ọzọ dịkarịsịrị, mana, dịka ihe niile na ndụ, anyị nwere ike gbalịa ime ọtụtụ ihe iji dozie ya, dịka ndị a:
Melite sistemụ arụmọrụ. Ọ bara uru ka ọ bụrụ na emelitere sistemụ arụmọrụ emelitere, nke a dịkwa mkpa karịa mgbe anyị nwetara batrị, njikọ ma ọ bụ nsogbu ekpo oke ọkụ.
Weghachi LG G3. Ihe ngwọta ọzọ na-arụkarị ọrụ na ọtụtụ nsogbu ngwanrọ bụ iji weghachite ngwaọrụ ahụ, yabụ ọ bụrụ na LG G3 na-ekpo ọkụ, anyị nwere ike ịchekwa data niile dị mkpa ma weghachite mkpanaka ahụ. N'ebe a, m ga-akwado ịghara iweghachite nkwado ndabere (ee data ahụ).
Wedata ihie na aka. Ọ bụrụ na ikpo oke ọkụ anaghị adị oke, ọ nwere ike bụrụ na ihe anyị na-ahụ bụ ihe na-enye mmetụta ma ọ bụ mania karịa ihe ọ bụla ọzọ. Iji jide n'aka na anyị nwere ike belata nchapụta ihuenyo LG G3 na, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị mma, ọ ga-abụ na nsogbu anyị dị n'isi anyị karịa na ekwentị anyị.
Gbanyụọ LG G3 wee chere 10-15 nkeji.
Dochie batrị na nke ọhụrụ.
Zụta batrị maka LG G3
Ọ bụ ihe dị mma banyere ịnwe ngwaọrụ mbughari batrị: Ọ dịtụ mfe ịchọta batrị ọhụrụ ma ọ bụrụ na nke ochie enye anyị nsogbu. E nwere ọtụtụ narị ụlọ anụ ahụ na n'ịntanetị ebe anyị nwere ike ịzụta batrị, mana m ga-atụ aro mgbe niile ile Amazon anya. Anyị na-ekwu maka ụlọ ahịa na-enye nkwa kachasị mma nke anyị nwere ike iche n'echiche, ịlaghachi ego ahụ na-akụghị ya ihe ma ọ bụrụ na anyị enweghị obi ụtọ na ihe anyị zụtara.
Ọ dịkwa mma ile anya Amazon n'ihi na anyị nwere ike ịhụ ihe ndị ọrụ na-eche maka ngwaahịa ọ bụla, echiche anyị nwere ike ịhụ n'ụdị nkọwa. Banyere nke a, ihe anyị ga-eme bụ ịlele na ihe ndị a kwuru nwere akara "Verified Purchase", nke pụtara na onye ọrụ ahụ azụrụ ihe ahụ ma mee ya na Amazon. Site na ime nchọta dị mfe anyị nwere ike ịchọta nhọrọ ndị a, ụfọdụ n'ime ha nwere ikike ka ukwuu:
Perfine Li-ion gbasaa dochie batrị 6000mAh.
Mbuynow 9600mAh Batrị Li-ion.
Perfine BL-53YH Li-ion Batrị 6000mAh.
Ma ebe ọ bụ na agaghị m achọ ibu ọrụ nke ịzụrụ ihe ọjọọ dakwasị m, ndụmọdụ m bụ ka ị nọrọ n'eziokwu na anyị nwere ike ịchọta batrị nke ụdị dị iche iche maka LG G3 n'ụdị ụlọ ahịa eletrọniki niile, yabụ Ọ kachasị mma lelee ụlọ ọrụ dị iche iche iji jide n'aka na anyị chọta nhọrọ kachasị mma maka anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G3 Nsogbu: Usoro abụọ iji melite arụmọrụ LG G2 na-enweghị mgbọrọgwụ
Na ị ga-adị ka nke a na njedebe dị otú a ... Enwere m nkụda mmụọ ...
Buru n'uche na ọnụ ruo mgbe nanị ụbọchị ole na ole gara aga dị ukwuu, ihe bụ na ihe na-adịghị mma na nke a ọhụrụ update natara. O doro anya na ọ bụ ihe ihere na ihe ndị a na-eme, ọ bụ ezie na anyị ga-echere ma hụ ma ha anaghị ewe ogologo oge iji mejuputa ihe ngwọta site na nwelite ohuru site na OTA.
Aga m edebe gị. Ekele m enyi m.
Ndị na-emepụta ihe na-atụba nkume mgbe ụfọdụ n'elu ụlọ nke aka ha, dị oke njọ. Kwa ụbọchị, m bụ onye ofufe nke ndị na-emepụta China na ndị na-enweghị nhazi nhazi.
Ndewo, ị maara, melite lg g3 stilus m ebe ọ bụ na m melite ya, ọ naghị agụ ebe nchekwa dị na mpụga ma nwalee ya na ncheta 10 dị iche iche, azụrụ m nke ọhụrụ na anaghị m ewepụ ya na ọ gwaghị m na Enwetara m ebe nchekwa ahụ, anaghị m amata ihe m nwere ike ime ebe ọ bụ na m na-eji ekwentị amụ ihe ma enweghị m ike ibudata ihe ndị ị na-ezitere m site na mail tupu oge eruo, daalụ nke ukwuu
Ndewo Francisco, a na m eche ịzụrụ LG g3, kedụ ndụmọdụ ị nyere m?
Zaghachi Henry Ovalles
Tupu m ekpebie maka lg g2 mba ụwa ma ọ bụ d802 na 32 gb. Ọ na-agba lg g3 otu puku ugboro.
Ricardo Burgundy dijo
Ekele, tinye menu zoro ezo ma gbanyụọ ịkụ aka na ọnọdụ, ugbu a ọ naghị agba ọsọ, olee otu m ga esi megharia ya ọzọ?
Zaghachi ricardo borgoño
Na-eme otu usoro ị mere ma na agbara ya?
Agbalịrị m ugbu a, tinye menu zoro ezo, mee ka ọ rụọ ọrụ, gbanyụọ ya, hapụ ya ka ọ dị otu nkeji, gbanye ya wee hapụ ya ka ọ zuo ike maka nkeji ọzọ, gaa n'ihu otu, ekele si na Peru, daalụ maka azịza gị.
Gha ọcha dijo
Ndewo, ịnwere otu wsp maka azịza ya?
Ndewo enyi m na-akwado lg g3 d850 nke kachasị mma na m nwere ụdị niile na ọ bụ nke kacha mma anwale
M na-aga 10g na nka na zuru oke.
mee ka ọ dị mfe dijo
Eziokwu bu na aghotaghi m, otu ha g’esi gbanwe echiche nke ndi mmadu nwere banyere android n’enweghi oke onu ogha n’iru ya ma oburu n’onye buru ibu nwere onye ruru eru nke di ala. ọnụ ya dị oke mma ma jiri nwayọ sọftụwia wdg ọ na - ahapụ gị n'ọnọdụ dị egwu
Zaghachi iji mee ka ha dị mfe
Ugwu Pedro Saez dijo
gbasie, emeela m ya, mana mgbe m nwetaghị ihe ọ bụla, enwetara m ozi, oke okpomọkụ na njedebe, ọ ga-agbanyụ maka nchekwa gị, amaghị m mgbe nke ahụ gasịrị, n'ụzọ ezi uche dị na m ga-eweghachi ya otu ọ dị, xdd
Zaghachi Pedro Saez Montaña
Ekwenyere m na gị Francisco, agbanwere m na Satọdee Ọgọstụ 9 maka nke ọhụrụ, ebe m zụtara ya na andlọikpe na na telephony ha na-eche ihe m na-eme, yana mmelite ikpeazụ, oku sitere na oku ma ọ bụ usoro jiri nwayọ nwayọ, mgbe ịpịrị na kọntaktị ahụ, obere okirikiri pụtara wee malite ịhazi, ị nwere ike ịkpọ oge ahụ ma ọ bụ gaa n'ihu nhazi yana mgbe ịchekwara ya, mgbe obere oge gachara oku ahụ ma ọ bụrụ na ịchọpụta, Ihere na nkewa NKE LG !!!!! Ejiri m nke ohuru mee ule a, ha gbanwere m. N'ụlọ m rụnyere kọntaktị ma malite ịkpọ oku ma kwụnye ma ọ bụ gbalịa ma ihe niile dị mma. M wụnye mmelite mbụ ma nọgide na-akpọ oku zuru oke na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ nhazi, mana mgbe m wụnye nke abụọ na nke ikpeazụ, mmechuihu m bịara, ọ malitere ime ihe gara aga, ọ na-ejide ya mgbe ị na-akpọ oku, etinye m ya ihe ọmụma nke Courtlọikpe na ha Ha gbanwere ya maka akara ọzọ ma ọ bụ ha nyeghachi m ego ahụ, mana amaghị m ihe m ga-eme, n'otu aka, ọ bụghị uru ịkpọ oku na nke ọzọ, ahụrụ m ya n'anya ọnụ, n'ihi na ejighị m n'aka na ha ga-ezite mmelite ọzọ ebe m chere na ọ bụ nsogbu ngwaike. tinye prawn, yana "obere ihuenyo" Quad HD ebe m chere na onye nhazi ahụ adabaghị ... na-atụ anya na ọ bụghị. kẹle mu dobekwa iya phọ.
Ekwentị g3 m na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma batrị ahụ gwụchaa n'ime awa 3 ma m gbalịrị usoro gị, ọ na-arụ ọrụ maka m, ekele Carlos de Lima Peru
Zaghachi Carlos Mesarina
Francisco, Abụ m Luis ọzọ, m mere aghụghọ ahụ ... enwere m ike nke mbụ dị mfe ma n'oge ahụ achọpụtara m otu ọnọdụ okpomọkụ ahụ na ọnụ, ọ bụghị karịa na mbụ na nwayọ m nwere mgbe m na-eme na-akpọ ma site na onye na-akpọ oku na akwụkwọ kọntaktị ahụ apụla, ọ bụ ihe ihere mgbe ịpị, obere okirikiri hapụrụ nhazi wee kpọọ oku na-egbu oge, enwere olile anya na batrị ahụ nwere ike ijide ya, ana m eji ya maka ikwu okwu na foto, ya mere Echeghị m na ọ na-emetụta ndụ batrị nke ukwuu
M nwere m gbanyụọ PK okpomọkụ na-adị elu nke na ọ gbara mkpịsị aka m na ihuenyo na elu na 5 nkeji iji Maps
Aga m anwa ime LG ka m bulie Mobile a ma nye m ozo ohuru ... M ga-ekwu okwu na Mọnde ma aga m agwa gi maka ya
Dị ka m kwuru na ozi abụọ gara aga, emere m ule ahụ ma ọ naghị ekpo ọkụ ma ọ rụọ ọrụ nke ọma ma batrị alaghị karịa mgbe emelitere abụọ ahụ, nke Francisco na sava kwuru, abụrụla otu nnukwu. Nyaahụ mmelite ọzọ bịakwutere m nke atọ ma ọ dị ka ọ dịwanye mma, yabụ agbaghaala m CPU na nge ihu ihuenyo na ụkpụrụ ụlọ ọrụ, ọ dị mma.
Ọ dị m ka maka ndị gị nke na-ekpo ọkụ na ọdụ, ị gaghị eji ya maka iji ọrụ, ọ bụrụ na ọ bụghị maka egwuregwu na nbudata dị iche iche na yabụ na ị gaghị enwe ọnụ mmiri oyi.
B myGH enyi m, ana m eji ya maka nkata na ihe. Oge ụfọdụ ọbụlagodi na anaghị m eji ya, ọ na-ekpo ọkụ m na-ewepu wifi na netwọkụ, mana ọ ka na-ekpo ọkụ ma nwayọ nwayọ, tinye nke a ka ị hụ otu ọ ga-esi ga.
Zaghachi EAB: V
Ndewo, enweela m LG G3 "Spanish / mba" otu ọnwa na ọkara.
Na-eyi m ụjọ n’ihe ị na-ekwu banyere mmelite ndị ahụ. Taa (August 18) Enwere m mmelite ngwanrọ nke oge nke abụọ, ma ọ bụghị na nke a ma ọ bụ mmelite gara aga enwebeghị m nsogbu.
M na-egwu Oge a na-alụ ọgụ 5, nke ugbu a bụ egwuregwu na-achọ ihe kachasị (ihe osise kachasị mma, ịma jijiji na ntiwapụ, Wi-Fi na-aga n'ihu ...) na ọ na-enweghị oke ma ọ bụ na-ekpo ọkụ (S5 nwanne m nwanyị na-ere ọkụ mgbe ọ na-egwu egwu).
Enwetụbeghị ụdị ụdị ọ bụla, na ịhazigharị ụkpụrụ mmekọrịta email / ihu igwe nke ọma, ma na-eme otu ihe ahụ na ọnọdụ ọnọdụ ya, batrị ahụ na-anọ m nwayọ maka ụbọchị 2, ma na-eji ezigbo ego eme ihe (ihe nke oge okpomọkụ ) O were ụbọchị anọ na elekere iri abụọ na atọ.
N'ezie, naanị "ihu ala" nke m na-ahụ na ọnụ ya bụ na elekere ọkọlọtọ anaghị enwe nhọrọ nke ịkpọte gị site na imeghe ngwa redio.
Kedu ihe kpatara na ị nwere nsogbu ndị m na-enweghị (maọbụ na enwebeghị m ya)? Eji m oroma were nke m, mana m maara na oroma anaghị etinye aka ọzọ ma ọ bụ 100% dị ka a ga - asị na ọ bụ n'efu
Ọ bụrụ na ị jiri ya dị ka egbe ma tufuo ogbugba ... ọ na-egbu gị, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ya ọtụtụ maka ikike na ọdịdị ya ... chere maka mmelite iji kwadebe ya
KWES WITHR YOU KWES OSR N unu OSCAR, MA UGBU A Ihe na-emetụ m n’obi Kachasị mma bụ ozi ọma na ọkwa ụwa niile na ọ bụ na charisis gbawara ma ọ bụ gbawara agbawa, Chassis si na bọlbụ si na Michael Micro, foto ndị dị adị nke ezughị oke na nke a abụghị. Ogologo oge, M KA M HOVR THIS THISB THISR EV A, Ọ B TH ezie na a mara ya na ọ bụ ihe na-emebi emebi na iwu ya na ngwụcha adịghị mma na maka PANATALLA, NA-EKWU NA Mkpebi ahụ adịghị abụ nnukwu, ya mere m. MGBE MGBE Ọ B WITHR MANY NA AKW MANYKWỌ ND NE ỌZỌ NA-EME M laghachiri ya. UGBU A Maka Septemba ọhụụ ọhụụ sitere na ọtụtụ akara abanye ...
MGBE M KWESPLR MY ND MY M M Bughachiri ya, Ebe m zụtara ya n'ụlọ ikpe na ọ bụ n'ime oge, ugbu a enwere ọtụtụ ụzọ, na foto ndị mmadụ na-eme mkpesa, ndị na-akụda ikpe ma ọ bụ chassis n'okpuru, site na ebe nke Ekele nke Michael
onye maara ihe mere ụdaolu ọbụna mgbe ọ bụ na kacha dị ala na i nwere ike o siri ike ịnụ onye nke ọzọ
Ndewo, ọ dị ezigbo mma 3 ụbọchị gara aga, azụrụ m Lg G3 ọhụrụ nke 16Gb agba ọla edo si Vodafone na enwere m nsogbu mgbe m na-akpọ ihe atụ mgbe m kpọrọ oku telefon 34 tinyere ọnụ ọgụgụ ekwentị anaghị ekwe m mee oku ma mgbe m wepụrụ prefix ọ na-ahapụ m na nsogbu nke abụọ bụ na ozugbo m chọrọ ịgbanyụ wifi n'elu taabụ nke ekwentị ahụ, ọ naghị ekwe ka m gbanyụọ ma n'oge ọ tụgharịrị ozo. Biko kwue okwu ma obu gwa m azum, Ekele na ekele.
Eduard m na-adụ gị ọdụ ka ị weghachi ya, dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe m kwuru bụ m Luis, n'ikpeazụ ọ bụ ihe m mere, mgbe anyị na-akwụ ụgwọ "a mgwakota agwa" ọ bụ omume rụrụ arụ na nnukwu ụdị na-eme anyị dizzy ma mee ka anyị taa ahụhụ, iwepu ogwugwu ogwugwo ma megharia ha ma oburu na ha puru onu ogugu nke aru ike anyi na iwe ma oburu na ha puru, o gaghi abu nke mbu ma obu onye ikpeazu, ha eweputa onu ogugu maka ndu. M na-ejegharị na nke ochie m nwere n'ụlọ, ugbu a na-eche Septemba mgbe nnukwu ngwugwu akara ọhụụ pụtara. ekele.
Ka anyị hụ, n'eziokwu m sitere na Vodafone ma anaghị m atụle ịlaghachi ya ma chere ruo Septemba amaghị m Luis, enweelarị m ọ laghachiri, ha ga-enyocha nkwarụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị, gbanwee ya maka nke ọhụrụ. G3 ma ọ bụ chere ka m hụ otu m si nweta nke ọhụrụ a na ha ga-ewetara m mgbe ha gosipụtara ọdịda ahụ.
Ọ fọrọ nke nta ka m chefuo, ihe mere ọ ji bụrụ ahịhịa ikpeazụ m ga-alaghachi bụ oke ikpo ọkụ nke ekwentị na-enweghị iji egwuregwu ma ọ bụ ọtụtụ nbudata ma ọ bụ jiri ya mee ihe ga-ekpo ọkụ ruo 39 40 Celsius Ekwentị ahụ jọgburu onwe ya na ọ bụ otu n'ime Smartphone dị elu na ahịa.
Ọ dị mma, lee ihe dị ka otu ọnwa gara aga enwetara m g3, mana n'abalị m kwụsịrị vibrating ... M weghachiri ya ụlọ ọrụ mmepụta ihe na enweghị ihe ọ bụla, agara m ntọala niile nwere na ịnwe na enweghị ihe ọ bụla! Ọ dị onye ọ bụla nwere otu ihe ahụ?
Zaghachi Joe Valdez
Ndewo enyi, otu ihe ahụ na-eme m. Ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ, emeworị m nrụghachi ụlọ ọrụ na ọ ka ga-abụ otu. Olileanya ị nwere ike inyere anyị aka ..
Ndewo onye ọ bụla, enwere m ụdị 855gb db32 nke ụwa, gbanyere mkpọrọgwụ ya ma tinye 4.2.2 android rom, ọ na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ, enweghị m nsogbu, ihe niile na-arụ ọrụ ọfụma na enweghị m mgbape ahụ ha kwuru, enwere m olileanya na ha dozie nsogbu gị
Mmmmm, ọ bụ m, ka ọ dị m ka enwere ọtụtụ Troll gburugburu ebe a na-emegharị ekwentị ahụ? Karịsịa, enwere otu nke yiri ka ọ bụ naanị raara nye ịkwado ịgbanwe ya. Enwere m G3 ma ọ dị mma kemgbe ọ pụtara ... Ọ na-adị ntakịrị ọkụ, mana ọ bụghị karịa ndị ọzọ, n'eziokwu. Na cracking casing, na na na na na na na na na na na na na na na na ezile… Ezi, m nwere ya na ndị magburu onwe Ndenye gburugburu.
Ndo, a na m achọ ebum n’uche gbasara LG G3 mana ọ ga-abụrịrị na agbanweela m peeji na-ezighi ezi wee banye “akpa n’akpa G3” nke ... asọmpi ahụ, xDDDD !!. Nke ahụ bụ ihe na - eme gị na ekwentị mkpanaaka bụ iwere ya na mmemme Iker Jiménez ma ọ bụ enwere ike ịkọwa ya dị ka X-faịlụ (ma ọ bụ na ọ bụ naanị ụgha). Kemmasi !!! LOL.
Banyere: onye ọrụ ọfụma nke G3 n'enweghị nkwụsị, enweghị oke ọkụ, enweghị obere okirikiri mgbe ọ na-atụ na kọntaktị, igbu oge na oku, enweghị nsogbu na Quad HD "obere ihuenyo", enweghị ọkụ na mkpịsị aka mgbe ị na-emetụ ihuenyo ahụ, mba cracks or cracks in the chassis from the micro ... blablabla (akụkọ zuru ụwa ọnụ, bụ na m na-ekewa !!! haha), enweghị batrị (s) nke ga - ewe awa 6 (ọ bụghị otu, batrị abụọ !!), na ndị dị otú ahụ dị otu a.
PS: Alexx EE enwere otutu ihe.
Amaghị m ihe kpatara LG jiri mara nke ọma…. Naanị m rịọrọ maka ya, ọ bịarutere na ụbọchị 3 ma ụjọ tụrụ m ịchọta ịchọta mmejọ, ebe 95% bụ okwu ọjọọ maka G3
Ndewo, m zụtara ya ma ọ bụrụ na ọ nwere lag, m na-echeta mgbe m zụrụ galaxy s3 lag n'ebe niile, yana mkpuchi ya na akpa m, azụrụ m ya site na onye ọrụ na amaghị m ma ọ ga - eme ka m melite ya. , ọ na-agwa m na ọ nwere arụnyere sọftụwia kachasị ọhụrụ. Adị m njikere ịgbanwe ya, a na-anụ ndụmọdụ banyere akụrụngwa ịzụta
Joe nwa dijo
Morningtụtụ ọma ekele gị si Panama. Onye nọ ebe a enweela nsogbu na g3 na mberede, ịma jijiji na-akwụsị ịrụ ọrụ yana ibugharị cell ahụ n'akụkụ, ọ bụ na ọ na-achịkwa ijijiji, amaliteghachiri m ụlọ ọrụ 4 ugboro ugbu a na ọ nweghị!
Zaghachi Joe Black
Ndewo, m ga-achọ ịma ụdị mmelite ị kpebiri bụ ihere, enwere m v10e na amaghị m ma imelite v10h, ekele
Ndewo onye ọ bụla, amaghị m ihe kpatara ọtụtụ mkpesa m na-ahụ na ọ bụ nnukwu ọnụ, eziokwu ... ọ na-arụ ọrụ nke ọma .. Atụrụ m egwu batrị na ọ gaghị ejide m n'ihi na m gụrụ n'ọtụtụ ọgbakọ na-ekwu na 2k ihuenyo nwere ya pụta .. ma ọ bụghị n'ezie. na batrị dị ụbọchị 2 karịa oge m gara aga S5 ... naanị ihe na-eme ka iwe wee m bụ akara nke Antutu Benchmarket na-ebupụta nke 26.000 ruo mgbe Galaxy S4 na-ebupụtakwu obi umeala ... Echere m na ọ bụ mmeghe mana m mere ọ ọzọ ugboro 7 na ọ gafere 27 ... agbanyeghị ọnụ ya dị mma. Ma, m na-eche na LG kwesịrị ịnabata ụfọdụ nsogbu na software na ụfọdụ lag .. mgbe niile dịkwa mma.
ụwa celtic dijo
Izu uka abuo gara aga azutara lg g2, ubochi nke ozo m ghaghachitere ya n'ihi batrị noogidere aka elekere isii na-ejighi ya ma juputa na ya, ha wetara m ozo ma otu ihe a mere, ha gwara m na lg na n'ime ulo ahia na ha weghachite ụbọchị ndị a maka nke a ma jiri nke a, m ga - edozi esemokwu ahụ, ọ bụrụ na tupu Tọzdee ha anaghị eme ya, m na - alaghachi ọdụ ahụ ma zụta ọzọ.
Zaghachi ka mundoceltico
Enwere m LG G3 Enweghị m nsogbu na ya, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, enwere m afọ ojuju na ịhọrọ LG G3 kama Samsung Galaxy S5, n'ihi na m si Samsung S4 wee nye m nsogbu, batrị ya abụghị dị mma, sistemụ Ọ nwayọ nwayọ, igwefoto ya adịghị ewe foto, echere m banyere ịtụle S5 mana ka ọ bụrụ otu (ha na-ekwu na ọ ka mma), ugbu a na LG G3 m nwere, batrị na-adịgide ruo ụbọchị 2 site n'iji ya eme ihe, igwefoto ya na-ewe foto ngwa ngwa na karịa nke ọma ma n'ehihie ma n'abalị ma anaghị m ewepụ foto ahụ yana ekele maka eziokwu ahụ LG mejupụtara laser autofocus nke na-atụ anya nke ebumnobi a ga-eme na-eme ka Nweta ụfọdụ magburu onwe foto, ma ghara banyere ya 5,5-anụ ọhịa Quad HD ihuenyo bụ magburu onwe ya na ihe niile na-enweghị na-amụba nke nke ekwentị ukwuu, M nwere ike ijide ya na aka m na ala, na mkpụmkpụ Obi dị m ụtọ na m họọrọ LG G3 bụ ezigbo ekwentị.
Ndewo onye ọ bụla, n'ikpeazụ, enwere m ike ịgbanye ekwentị ahụ ma melite ụlọ ọrụ ikpeazụ ma mgbanwe ahụ dị ịrịba ama, lag kwụsịrị, ndụ batrị ka mma, ụfọdụ nkọwa na-efu ma ugbu a enwere m obi ụtọ na ekwentị na mgbanwe site na full hd bụ kwesiri ngosi na 2k bụ ikpọ
Amaghị m ihe m ga - eme ebe ọ bụ na ekwentị na - erepịa batrị ahụ ngwa ngwa, na 30 nkeji naanị na-akpọ swiiti okuku ọ na-erepịakwa 45% nke batrị ahụ ma ọ jọgburu onwe ya nke na enweghị m ike ịkpọ, ebe ọ bụ naanị m na - ewere ya n'ọnụ ya na-egwu. Amaghị m ihe m nwere ike ime n’ihi na m kpọgara ya na movistar na ha anaghị enye m azịza ọ bụla.
Ekele m dee site n'ike mmụọ nsọ nke a na-agụ na saịtị a. Oo chimoo . Hahaha. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ekwentị na njirimara ọjọọ ndị a niile, gaa maka s5 exynios. Esi m na nke ahụ pụta. O mere ka ọ dị ọkụ nke na o mere ka m pụọ n’egwuregwu ndị dị mfe. ngwa njehie ọ bụla 10 nkeji. O nweghi ndakọrịta ma ọ bụ na facebook. Nke a yiri m mma na ya 4k ihuenyo na ọ na-arụ ọrụ nke ọma karịa s5. ọ bụ ezie na akara akara auntuntu anaghị akwado ya. ihe na - agbanwe na lollipop nke na - abawanye ihe na 40.000 ihe ruru. Ekele m na echere m na ị mụtara ịgba ọkụ ma dozie nsogbu afọ.
Zaghachi ka ruben carranza
Mmelite site na ngwa ọrụ ihe ọkụkụ 2014 gaa na nsụgharị Lollipop nke 20A ma ọ na-eme ka ọtụtụ lag lag, ọ na-adịkwaghị ekpo ọkụ ọ bụla, naanị melite m kwadoro ya.
Ebe ọ bụ na ikpeazụ update ya mgbe ụfọdụ blinks na a mkpọtụ na akwụkwọ ahụaja na-agbanwe ka nke mbụ. Iji dezie ya m ga-gbanyụọ ya na-etinye m họọrọ akwụkwọ ahụaja azụ na. Nke a ọ na-eme onye ọ bụla ma ọ bụ ị maara nsogbu ahụ?
Ọbụna melite lollipop adịghị edozi nsogbu jọgburu onwe ya na LG G3 d855. Esi m na s4 gaa LG, ọ bụ nnukwu ndudue. Ọnụ nke njirimara ndị a na nke a na-eme na ha anaghị edozi ya na-egbu mgbu. Igbu oge na imeghe na mmechi ngwa ma ọ bụ ịga na ihuenyo mbụ, ọbụlagodi na ọ bụ iri n'ụzọ nke abụọ, bụ ịkpọasị. Ma agwala m na ọ bụ okwu nke kpo oku, ma ọ bụ ọnụ ọnụ. Ọ bụ nke abụọ mobile ebe ọ bụ na ekwentị ụlọ gbanwere ya na-eche na nke mbụ bụ moronic. Emere m mgbanwe na nhọrọ ndị dị elu na-apụta na nnọkọ a gosipụtara na ihe ọ bụla, ụlọ ọrụ nrụpụta ọtụtụ oge, mgbanwe launcher.etc. Kpamkpam mgbe m nwere ike m ga-agbanwe ọzọ, na anaghị m nwere ike ikwu nke a mobile ka onye ọ bụla. Ọtụtụ chere na ọbịbịa lollipop ga-edozi ya, ọgbaghara.
Zaghachi na androidemassote
Morningbọchị ọma. Couplebọchị ole na ole gara aga ha nyere m lg g3 na eziokwu bụ na ihe niile na-aga ruo mgbe m nyere ya iji melite ngwanrọ na enweghị m mmasị na nsụgharị ọhụrụ ma ọlị. Nwere ike ịgwa m otu m ga-esi wepu ụdị ọgbara ọhụrụ a inwe nke gara aga?
Ndewo, echere m na ị ga-enwe mmasi maka mmelite ọhụrụ ahụ ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị mgbanwe mgbanwe kamakwa mmelite maka ojiji n'ọdịnihu. Enweghi ngu.
Enwere m ya otu ọnwa na emelitere ya na nsụgharị kachasị ọhụrụ, na enweghị m nsogbu na nke ọ bụla n'ime abụọ, nnukwu ekwentị ma ọ bụrụ na ọ bụ na gburugburu okirikiri, ọ ka mma, amaghị m ebe ha Ọ nwere ike ịbụ na ọtụtụ mmemme arụnyere n'otu oge, (Amaghị m ụlọ ahịa, ma ọ bụ ndị ohi) ... ị nwere nje ma ọ bụ mmemme obibi nke na-eme ka ọ dị ọkụ? maka nke m nke ọma ma nwee obi ụtọ, enwere m olile anya na agaghị m abanye n'ime oge iji mezie, mana ka m na-ahụ ya, enwere m obi abụọ.
Ma ọ bụ eziokwu na ọ dị ka enwere ọtụtụ "abanyela" na ngalaba a nke raara nye na-atụ ndị ọrụ ahụ ụjọ, n'ozuzu m na-ahụ na ndị Fans "S" na apụl tara, ọ bụrụ otu a, na-echegbu onwe na G3 na-aga nke ọma .
Ọ na-amasị m nke ukwuu, batrị na-ada m, mana ọ naghị adịte aka mana m na-enyekwa ya ọtụtụ bọọlụ. olile anya idozi batrị
Ndewo ndị enyi, enwere m g3 ma zụta ya ọhụụ, ewepụtara ya, mana nsogbu siri ike ọ nwere bụ oke kpo oku, ọ bụ na mberede, ọ ga - abụ nnukwu ọnụ na ihe niile dị mma mana oke ọdịda ya bụ oke ọkụ ọ nwere n'agbanyeghị na ọ na-emelite ya na 5.0 ... Echere m na ịbụ onye ukwu n'etiti smartphones nke oge a, ihe niile ga-adị mma mana m hiere ụzọ, na Motorola G nke abụọ m emebeghị, m rere ya iji nweta nke a mana ọ bụ mmeghe, m nwere olile anya na LG nwere ụfọdụ ngwọta maka nsogbu a siri ike
Ezigbo ọtụtụ lag lagos na-agbazi ya na mmelite na lollipop V20h. n'agbanyeghị na mgbe ụfọdụ ọ na-ekpo oke ọkụ na bọtịnụ azụ. mana ọ bụ nnukwu mgbanwe
Njehie… Enwere m V20h ma ọ ka bụ otu… lagazos ebe niile mobile ekwentị na-esote phone Iphone 6… Fuck Android
Ewoo! Ihe ọzọ ... ebe ọ bụ na emelitere m na 5.0 ekwentị ahụ dara mgbe ọ ruru 99% ụgwọ wee malite ịme mkpọtụ na-aga n'ihu ruo mgbe a kwụpụrụ ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla m ga-enweta ozi »mmalite amalitela» naanị na-apụ ngwa ọ bụla. Bịa ... jollita m ga-eziga hel ozugbo m nwere ike
Ọfọn, nke m sitere na movistar Colombia, enwetara m ya na Disemba ma ruo ugbu a ekpebiri m igwu egwu kachasị na ihe dị ka nkeji 20 ọ malitere, m gara n'ihu na-egwu egwu ma mgbe minit 5 dọrọ m aka na ntị wee gbanyụọ, m hapụrụ egwuregwu ahụ na ọ dighi eme okenye mgbe a na-agụ maka nke a. Batrị ahụ jiri gps, data, wifi, nchapụta akpaka na ojiji nke Bluetooth na nke a karịa ma ọ bụ obere awa atọ m ga-enweta batrị na 20 na ihe dịka 8 n'abalị, na-amalite batrị zuru oke na 9 am. Enwere m na ndụ batrị ka ọ bụ na ọ na-agba ọsọ ọsọ? iji hụ ma anyị weghachiri ya. Banyere.
gbalịa ibu ya tupu o rue 15% nke vateria a greeting!
Ndewo Enwere m lg g3 ọhụrụ izu ole na ole gara aga mana ọ nweghị nkwa ọ bụla na amaghị m ihe na - eme ya, ọ na - agbachi onwe ya, oge niile kwa sekọnd abụọ na naanị ụzọ bụ iji wepụ batrị ahụ.
Na-akpọ oku ọ kwụgidere, ị nweghị ike igbubi ma ọ bụ jiri ya ruo mgbe onye ọzọ belata.
Give na-enye bọtịnụ azụ ọ gbachiri ma mgbe 2 sekọnd ọ gbachiri ị gaghị enwe ike ịmeghe ya, agbalịrị m ịtọgharịa ya site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na n'ọnọdụ nchekwa na ihe ọ bụla.
Amaghim ihe m geme, ekele
Ndewo, enwere m D855 32GB 4 ọnwa gara aga, azụrụ m ya na Amazon ma eziokwu ahụ bụ na enwebeghị m nsogbu ọ bụla, enweghị kpo oku, enweghị mmalite, enweghị lag nke ukwuu na kit kat, ma ọ bụ mgbe emelitere ya na lolipop ma enwere m ụdị V20H -TWN-XX
Anọ m na ekwentị maka ihe karịrị ọnwa 5 !! ọ nweghịkwa ihe ọ bụla ị na-ekwu mere m, ọ bụghị kpo oku, ma ọ bụ lag, ma ọ bụ gbajie n'okpuru ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ zuru oke maka m, ihuenyo ahụ kwuru na ọ dịghị Can nwere ike ịhụ ihe mkpebi 4K mkpebi, lee anya mara tinye iPhone 6 wee tinye LG G3 n'akụkụ ya, kpọọ vidiyo YouTube ọ bụla karịa 1080p ma ị ga-ahụ ihe dị iche, ogo ihuenyo LG G3 dị obi ọjọọ !! You bụ ụfọdụ trolls nwere plasticine aka ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ, ma e wezụga na m na-agụ na ị na-eji ya ịkpọ na foto, ya mere na ị chọrọ lg g3? Nweta s2 ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ maka ihe ị jiri ya chekwaa! ! Akwadoro m 100 × 100 nzụta ọnụ a, enyi m nwanyị nwere iPhone 6 wee rie ya na poteto, ọbụlagodi ọ matara na ọ dị ịtụnanya!
Gịnị ka ị na-ekwu eyen ... ọ bụ oké ọnụ ma ha screwed ya na ọhụrụ na nsụgharị nke android, ọ na-aga lagged, mgbe ọ bụ ihe na-erughị 15% efu mgbe itinye ya mgbe ọ ruru 99% ọ na-aga n'ime a akaghị na ihuenyo anaghị akwụsị atụgharị na mkpọtụ na akwụkwọ ahụ aja na-agbanwe ọ bụla 3 x 4. Ka anyị gaa a virgeria…!
Ezi ụbọchị si Mexico azụrụ m ọdụ ahụ mgbe mmelite ahụ dị na lollipop enwere m nsogbu ma amalitere m inwe nsogbu ọnụ ya na-abịa n'oge ihuenyo ahụ amachaghị amata etu m ga-esi akọwa ya, ọ bụ lag, m kpọchie Mgbe m na-ekpo ọkụ, m na-ewere ya na akwụkwọ ikike wee pụta na ebe ọ nwere nsogbu n'okwu ahụ, ha enweghị ike ịgbanwe ya na LG anaghị arụ ọrụ. 'anabataghị nke ahụ, ọ na-agbanwe ekwentị ndị e lekọtara anya nke ọma, emere m nrụpụta siri ike ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma mana mgbe m jiri ya obere oge ma ọ nwere ọtụtụ ngwa Otu ihe ahụ mere ọzọ, achọrọ m ịma ma ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ọ dịịrị gị, agbalịrị m mods ndị a n'ihi na ọ gbadara ya na-ekpo ọkụ dị egwu ọbụlagodi na-ejighị ya mgbe ha nwere ya n'okpuru akwụkwọ ikike ipte maka ịzụta ọzọ mana ụdị nke bụ lg g3 stylus na ọ naghị ekpo ọkụ dị ka nnukwu njedebe
Nnọọ. Azụrụ m LG G3 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ gara aga. Enweghị m mmasị na ya. Ọ dị ezigbo nwayọ. Ọbụna imeghe WhatsApp adịghị ngwa. Press pịa imeghe WhatsApp na ekwentị na-ele gị anya ma mepee ngwa ahụ. Na n'elu nke ahụ, ozugbo ngwa ahụ mepere, foto profaịlụ dị na ndepụta nke akparịta ụka anaghị ebukọrọ na mgbe sekọnd abụọ ka a na-ebu ha. Hichapụ ọtụtụ vidiyo na foto n'ihi na i chere na ọ bụ nwayọ n'ihi na m nwere obere ebe nchekwa na ọ na-anọgide na otu. Enwere m Note3 n'ihu ekwentị a. Na Note3 m na-egwu Real Racing 3 na-enweghị nsogbu na enweghị nsogbu. Na LG G3 otu egwuregwu ahụ adịghị nwayọ ma nwee ọtụtụ lags.
Ma mgbe m nọ na ngwa, ana m pịa igodo mmalite iji gaa na ihuenyo ụlọ, ọ na-ewe oge iji pụọ ma mgbe ihu ụlọ na-apụta, ọ na-ebu gburugburu na-egosi na ọ na-ebu. Eziokwu bụ na ya na nhazi ya nwere, ọ bụ ihe ihere na ọ na-arụ ọrụ nwayọ a. Ọ naghị adị ka ekwentị peso 12.000 ebe a na Argentina. Ọ dị ka obere peso 3.000 peso cell ekwentị x ole ọ dị nwayọ. Ọ na-eme ka ị ghara inwe ndidi.
Emmanuel akachukwu dijo
Achọrọ m nkwado nke gị, ndị ọkachamara, ọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 15 iji weghachite ekwentị m na menu nke ọma n'ihi na ọ malitere ịpụta na android.system nọ na esemokwu
M weghachiri ya na ekwentị ahụ dị mma, ọ na-arụ ọrụ ọ ka mma ma ọ bụrụ na m wụnye antivirus site na ya ọ na-akpata nsogbu m na mgbe ị na-arụ ọrụ igwefoto ọ na-amalitegharị ma mgbe ụfọdụ ọ na-ekpo ọkụ ma ọ malitegharịa ma malitegharia Enwere m olileanya na site na ule ndị a na m na-ahụ na blog gị nwere ike idozi ya
Nzaghachi ka emmanuel chavez
N'ehihie, enwere m LG G3 D855, abịara m na vidiyo nke enwere ike ịhụ n'ụzọ zuru oke yana vidiyo YouTube, mana ọ bụrụ na mmadụ zitere m vidiyo, ha enweghị ike ịgụ ya, a na-anụ ya naanị na ọdịyo, kedu ka m ga-esi edozi nsogbu a? Daalụ
Zaghachi Ramiro Melean
Ndewo, aha m bụ Tatiana, azụrụ m lg g3 izu abụọ gara aga, emeela m ihe ị gwara m, mana ọ dị otu, ọ dị oke ọsọ, enweghị m ike igwu egwuregwu ọ bụla, enweghị m ike ịntanetị maka na ọ na-enweta kwa ekpo oke ọkụ ma ozi wee pụta na-ekwu na nche gị ga-agbanyụ ọnụ…. Kedu ihe m ga-eme?
Enwere m lg g3 stylus enwegoro m whatsapp mana m malitegharịrị kọmputa ọtụtụ ugboro ma ugbu a ibudata whatsapp ọ na-agwa m na ọ naghị ejikọ, ya mere gbalịa mgbe e mesịrị, ị nwere ike inyere m aka ekele
ogige martin dijo
Enwere m lg g3 eti ma enweghị m ike imelite sw. M mere ngwaọrụ gị na-adịghị aha. Kedu ihe m ga - eme ... biko, ngwọta ọ bụla, daalụ
Zaghachi ka Plaza martin
Morningtụtụ ọma onye ọ bụla, na-ekwu na m na-eji ọnụ 3gb l3 na-arụ ọrụ ruo ọnwa 9, azụrụ m ya maka 389e na titanium agba ma ọ bịaworị na lollipop 5.0. Enwebeghị m nsogbu ọ bụla, ekwuru m cell mgbe niile. ekwentị maka ụbọchị abụọ na ụfọdụ ọmarịcha foto na-aga dị ka ogbugba. M na-ebudata usoro m na 1440p iji hụ ha site n'oge ruo n'oge. Na nkenke otu ngafe
Diana Fonseca kwuru dijo
Ndewo, m si Colombia ma zụta ọnụ a 1 ọnwa gara aga na Movistar, ọ rụọ ọrụ nke ọma maka m, naanị ụbọchị ole na ole gara aga achọpụtara m na batrị batrị ngwa ngwa maka uto m na enweghị iji ya, x ihe atụ: mgbe m lakpuru ụra n’elekere iri na otu nke abalị. M na-ahapụrụ ya na 11% wee bilie n’elekere ise nke ụtụtụ. na achọtara m ya na 100% ma ọ bụ obere, taa dịka ọmụmaatụ ọ dị na 5% nwere nkwarụ wifi, netwọ data, yana ngwa ndị ahụ na-agba ọsọ dịka facebook na netwọkụ mmekọrịta. Onwere onye nwere aro ma o bu ndumodu ka nka ghara ime m? !! 🙁 ebe obu na obu ihe na-ewute m. Maka ezumike ndị ọzọ, azụrụ m ya Ndenye gburugburu ma ọ dị mma na chaja ikuku dịkwa oke mana ana m eche banyere ndụ batrị. Ah ọ na-ekpo oke ọkụ mana ihe nkịtị gbasara ekwentị ọ bụla m ga-ekwere, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ekwentị m mbụ dị elu hahahaha Adịghị m oke roba ka m wee nwee ike iji uru m zụrụ ma nwee obi ụtọ ya. !! Daalụ ndị enyi !!
Zaghachi Diana Fonseca
christobal sepulveda dijo
Ndewo, esite na Chile ma zụta ekwentị a izu abụọ gara aga, nsogbu bụ na mgbe m bidoghachi ekwentị, egwuregwu niile na-ehichapụ ma m ga-echefu ebe nchekwa ma ọ bụrụ na mmadụ enwee ngwọta, biko nye m ebe ụlọ ahịa anaghị achọ iweghara
Zaghachi cristobal sepulveda
Nnọọ! Enwere m LG G3 Beat, mana m na-eziga audios nke m dere na WhatsApp ma a na-anụ ha na obere olu dị ala ... Na olu a na-eche dị elu; Odika mgbe obula m zara nzuko, ha adighi anu m ... Gini bu ekwenti m? Nyere m aka!
You gbalịrị iwepụ aka gị na igwe okwu? Wepụrụ ihe nkiri nchedo nke na-abịa iji chebe ya na igbe ya? Oddly ezu, mgbe ụfọdụ ihe ngwọta dị mfe dị ka na-achọ na ndị obere ihe. M ka na-echeta oke mkpesa sitere na Xiaomi Redmi Rịba ama ndị ọrụ na-eme mkpesa banyere usoro reboots na ọ bụ n'ihi obere plastik na-echebe nke batrị batrị na-ewepu nke kpuchiri naanị njikọta na ọ naghị ahụ anya. Nke a bụ ihe kpatara nsogbu Xiaomi Redmi Note reboot.
Ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ị daa, ọ kacha mma ịga LG SAT, ọrụ ntanetị, ha ga-edozi ya n'ezie.
Ndewo, azụrụ m ọdụ a n'izu gara aga ma enwere m nsogbu na igwefoto, foto ndị ahụ adịghị mma ... ha adịghị ka igwefoto nwere njirimara anyị niile maara ... ndụmọdụ ọ bụla?
Ndewo Francisco, good night. Enwere m ụdị LG G3 D855P, ihe dị ka ọnwa 2 gara aga ọkwa nke ngwanrọ ngwanrọ ngwanrọ melite na emelitere m ya na Android 5.0 Lollipop. Tupu mmelite a, ekwentị nwere naanị nsogbu ihuenyo, nke ejiri akwụkwọ ikike dochie ya. Ozugbo emelitere iji kwuo nsụgharị 5.0, nsogbu ndị ahụ malitere, ihe mbụ m chọpụtara bụ na ọkpụkpọ egwu ndabara (ọbụlagodi na egwu egwu) kwụsịrị mgbe nkeji ole na ole, nke a ka na-eme mana oge ahụ dịgasị iche na naanị oge ụfọdụ anaghị eme. Achọpụtara m na ọ dị nwayọ nwayọ, enwere m ngwa yana ọ bụ ezie na ọ naghị ada ma ọ bụrụ na ọ na-ewe ogologo oge iji zaghachi. N’ikpeazụ ọ overheats ntakịrị karịa ka ọ dị na mbụ. Kedu ihe m kwesịrị ịme iji mee ka ekwentị m rụọ ọrụ nke ọma ọzọ?
Mara: ekwenti agbanyebeghị mkpọrọgwụ.
dezie ya ma hapụ ya ụlọ ọrụ mmepụta ihe na gam akporo 4.2, tinye menu, wee dezie ya, site na izugbe, wee dezie ma weghachite..ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndabere kọntaktị gị, foto, egwu, họrọ LG Backup wee lelee ihe ịchọrọ na nkwado ndabere na njikere .. ma ọ bụrụ na ị na-adịghị eme ya ọ dịghị nsogbu naanị na ị na-aga ida niile ozi gị ... na site na ị na-ahọrọ iji weghachi data ụlọ ọrụ, m naanị nwere ike ikwu na ị gaghị palomies na formatting na MicroSD ma ọ bụ mpụga ebe nchekwa na ị na-emetụ ebe ọ na-ekwu weghachi ekwentị na voila ... naanị ị ga-enwe ndidi n'ihi na obere oge ma hapụ m ka m mee usoro ahụ dum ma nwee batrị zuru ezu ma ọ bụ ka mma jikọọ ya na ọkụ ... chioma
Zaghachi onye mmeri
ụtụtụ ọma ihu ọma ma eleghị anya enwere koodu ụfọdụ maka LG g3
Zaghachi Diego Chachalo
Udochukwu okonkwo (@onkwoonkwochukwu) dijo
Enwere m nsogbu mgbe ha kpọrọ m ekwentị na-agba oji na ọnọdụ njikere ma were ihe dị ka nkeji 5 iji megharịa ọrụ, olee otu m ga-esi kpochapụ ya? M ga-enwe ekele maka ya
Zaghachi Edixon Quintero (@EdixonQuintero)
Edixon quintero malitegharia sel gị na - ahapụ ya site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gaa na ntọala, wee gaa izugbe wee si ebe ahụ weghachite na mweghachi (ebe a ị nwere ike ịme ndabere foto gị na kọntaktị gị, wdg) site na iji ọrụ LG ndabere nke dị mfe tinye only ga-enyocha ihe ịchọrọ ndabere, naanị ị ga-enwe ohere zuru oke na ebe nchekwa gị na nke ahụ bụ ya ma ọ bụrụ na ịchọghị ime ya ma ị nweghị mmasị ịhapụ ihe ị nwere na cell gị, ọ bụ mkpebi gị ... wee gaa tinye Factory Data Weghachi, adịghị aga na nne Mmetụta ka usoro SD na ebe nchekwa (mpụga) n'ihi na ị na-ehichapụ gị ndabere (ma ọ bụrụ na i mere) M olileanya na ọ na-arụ ọrụ n'ihi na ị.
Enwere m lg g3, m si Venezuela, enye m ya iwu site na amazon, n'ihi ihe ụfọdụ amaghị m nke batrị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, dịka na 5/6 awa batrị na-enye ya oge niile, ruo ugbu a nwere naanị whatsapp, anaghị m ebudatara ihe ọ bụla maka ihe batrị, mgbe anaghị m eji ya ma enwere m batrị na 100% na ihe na-erughị 15m ọ na-adaba na 96% (na-enweghị ojiji) enweghị m ike iziga ya na ọdụ M bi na Venezuela na enweghị ụlọ ọrụ LG, nkwa ahụ Mgbe ha na-ahapụ ekwentị US ha anaghị ekpuchi ya, yana n'ihi ọnọdụ nke mba m nọ, ọ na-esiri m ike iziga ekwentị n'ihi enweghị $ $
Pasent ndị dị na batrị na-agbada ngwa ngwa mgbe ụfọdụ na 10 min. Ha gbadaa ala abụọ ma ọ bụ ọkara m gbanye ekwentị iji zipu ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla na otu iti ihe pasent na-agbada ... Achọrọ m enyemaka 🙁 ebe ọ bụ n'ihi ọnọdụ dị na mba ahụ ọ ga-esiri m ike inweta karịa dollar maka ekwentị ọzọ: ((
Ekele m, m nwere lg g3 d855 16gb, enwere m nsogbu na batrị ahụ, ọ na-agbapụta ngwa ngwa ọbụlagodi n'ụra ụra, m wụnye dọkịta batrị na ọ naghị akwụ ụgwọ 100%, ọ na-anọgide na 99, mgbe m nwere 20% batrị ya agbanyụ, biko ndụmọdụ ụfọdụ, daalụ.
Ndewo, olee otu m ga-esi nwetaghachi ngwa igwefoto anaghị aza lg d855 m ma ọ bụrụ na mmadụ enyere aka
Zaghachi ka emegharia
Ndewo onye obula,
Eziokwu bụ na azụrụ m Lg G3 na enwere m ezigbo a happyụrị rue mgbe emelitere maka oge 3, ọ na-ekpo oke ọkụ ruo n'ókè nke ịkụ mkpịsị aka gị.
Emere m usoro 2 akwadoro n'elu mana ọnụ m ka bụ otu, ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, ọ dị ka ọ ga-agbawa.
Anaghị m akwado ka ị zụta ya n'ihi na e wezụga ịdị oke ọnụ, ngebichi n'ìhè anyanwụ, n'etiti ihe ọdịda ndị ọzọ, anyị bụ ihe ihere.
Ma ọbụghị na ọ gara ịchupu ma ọ bụ mebie lg g3 dị ka ndị ọzọ na-ekwu. Ọ bụ naanị ngụkọta ndakpọ olileanya.
Ndewo, esite na Chile ma enwere lg g3 Beat ... nsogbu bụ na ekwentị m na-ekpo oke ọkụ ma na-egbu oge ... tinye koodu ahụ akpọtụrụ n'elu mana ọ na-agwa m na enwere mperi na koodu .. . Amaghim ihe aga eme ... oburu na mmadu puru inyere m aka biko .... daalụ
Nnọọ!! Enwere koodu ọ bụla maka lg g3 stylus?
Kedu ka m ga-esi mara ihe ọkpọ m bụ?
Arturo Fuentes dijo
Lg G3 Stylus. Egbochiri n'ihi mmelite ngwanrọ.
Enwetara m ozi na m na-ebudata ihe ngwanrọ Software ... wee pịa imelite ...
Ma ekwentị agbanyụrụ wee gbanye ọzọ .. dị ka a ga - asị na ọ na - emelite sọftụwia ahụ .. mana ọ rapaara na - agbanye… na ọ nweghị ebe ọ mere .. karịa ihe karịrị nkeji 30 ..
(Yup .. ọ ka dị! .. 🙁
Enwetụbeghị m ya dịka nke a ... yabụ n'ezie ihe na-ezighi ezi na ngwanrọ ngwanrọ ahụ. Amaghịkwa m ihe m ga-eme.
Enweghịzi m ekwentị. Ọ dị oké mkpa na ọrụ m.
You ma ma ọ dị ụzọ ọ bụla ị ga-esi hapụ ya dịka ọ dị tupu mmelite a? .. Biko.
Zaghachi Arturo Fuentes
hugo lapizco dijo
Lg g3 dị nzuzu, eziokwu na - emechu ihu na cell
Zaghachi hugo lapizco
M buru ụzọ zụta g3 ma ọ bụ si na onye na-arụ ọrụ wee budata ya ma achọghị ya ọzọ, ha gbanwere m.
Onye nke abuo na-aga nke oma rue mgbe o dara n'ala n'ihi na onwere ntukwasi obi ma bido kpo oku. Ugbu a, aka m di oku ka o na enye m ogwe aka.
Beimak vargas nlele dijo
ihe mgbaàmà ahụ na-efu nke ukwuu mgbe ụfọdụ m ga-agbanyụ ya wee gbanye ya ma ebe ahụ akara ngosi ahụ ga-apụta ọzọ na mmadụ ga-ama
Zaghachi Beimak vargas negrete
dị mma niile .. a izu gara aga na m nwere LG G3 D855 stube iji wifi network cm 1 awa na ọkara mgbe ị na tube .. Adịghị m kpoo ihe ọ bụla na niile mobile .. ma n'abalị ikpeazụ m bụ egwu mgbe ọ Ana m enyefe intaneti na sistemụ kpakpando nke ọzọ 2x lg m na-ekpo ọkụ site na nke kachasị njọ na enweghị m ike imetụ ya aka. M ga-anwale nke Koodu ahụ .. Enwere m olileanya na ọ na-arụ ọrụ
james onyinye dijo
Ndewo, enwere m 3 GB lg g855 d16, ekwentị na-efunahụ onyonyo ahụ na ihuenyo, echere m na ọ bụ ihe ngosi, agbalịrị m ihe ngosi ọzọ na otu ihe ahụ na-eme, ihe niile mere mgbe emesịrị, yabụ ekpebiri m weghachite ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma hapụ ya ka ọ na-akwụ ụgwọ, ugbu a ihe oyiyi ahụ na-apụ n'oge ọ bụla m gbanyere ya, yabụ m na-egbochi ya ruo nwa oge wee jiri ya na mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ maka m, oge ndị ọzọ ọ na-aga n'ihu na njehie ahụ, nke ga-eme kọmputa a hp?
Zaghachi James pedroza
Ariadna Narvaez dijo
Ndewo, m ga-achọ ịma ma enwere ngwa iji gụọ wifi? Ebe ọ bụ na G3 arụghịrị m ọrụ ma ọ naghị agụ netwọ Wi-Fi ọ bụla, ọ na-ekwu na ha niile anọghị nso, mgbe ụfọdụ m na-anwa ime ka ịgbanye ma gbanyụọ ọnọdụ ụgbọ elu na ọ naghị arụ ọrụ na oge ndị ọzọ anaghị arụ ya. Ọ dị onye chọtaworo nsogbu a?
Zaghachi Ariadna Narvaez
Nnọọ. Enwere m g3 kụrụ ma ọ pụta na mgbe ụfọdụ m nwere ike ịhụ kọntaktị na mgbe ụfọdụ ọ bụghị, ma site na sim na site na ekwentị. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Ndewo, enwere m nsogbu, enwere m lg g3 d851 na. Mgbe m jikọọ ya na pc ọ naghị amata njedebe m ị nwere ike inyere m aka ịnwe lollipop android
Ọnye na -bụ Sergio Guerra? dijo
N'ehihie, enwere m ụdị D851 enweghị m ike ịnweta koodu 3845 # * 851 # kọmputa m na-ekpo ọkụ yana ihuenyo ahụ na-adapụ ma ọ na-adịgide n'efu, mmadụ nwere ike inyere m aka? email m bu jrsigr@hotmail.com Ana m ekele gị n'ọdịnihu maka enyemaka gị. Daalụ
Zaghachi Sergio Guerra
Ka chifoo. Esi m na Honduras, enwere m LG G2 VS980, n'oge na-adịbeghị anya ọ na-agbanyụ oge niile, ozi na-egosi na ekwentị na-ekpo ọkụ ma ọ na-agbanyụ, ọbụlagodi mgbe ọ naghị ekpo ọkụ.
Agụọla m na ụfọdụ nzukọ nzukọ banyere menu ezoro ezo iji kwụsị njikwa njikwa. Ma nsogbu bụ na menu adịghị egosi, anaghị m ahụkwa IMEI na * # 06 #
Ihe m nwere ike ime ??
My email: bafe19@yahoo.com
M tinye koodu ahụ, ọ gwa m na IMM ezighi ezi, m na-anwale otu puku ugboro, ọ na-ekwukwa otu ihe ahụ, kedu ihe m ga-eme n'ihi na ọ na-ekpo oke ọkụ ma ọpụpụ n'otu awa
Ndewo, nwute ugbu a ka ị gụọ aghụghọ gị iji mee ka nchapụta. Ana m agwa gị na ahụrụ m ya na azụmaahịa na Uruguay ebe ha rere ha "emezigharị, na-enweghị ọrụ hotspot" si na Verizón usa bubata na ọkara ọnụahịa ... ihe na-atọ ụtọ, n'ihi na mgbe m nwara ya ha rụrụ ọrụ nke ọma ... mana enweghị enwu, m nwara 3 na ha niile ka ha hụrụ na onyonyo ahụ nke ọma, mana "enweghị ndụ." Echere m na ha ga-enwekwa ntụpọ ahụ ma kpebie na ha agaghị azụta ya. Ezigbo ekwentị ... Aga m aga n'ihu na LG G2 m oge. Ekele na ekele.
Ndewo, enwere m G3 maka ọnwa 13, ebe m nwere ya, achọpụtara m na ọ na-ekpo ezigbo ọkụ mgbe ị na-eji ihe nchọgharị, facebook, wdg. ruo n'ókè na e weghachiri ya. Agaghị m mkpesa na movistar n'ihi enweghị oge, naanị m hapụrụ ya ka ọ dajụọ ma na-aga. Eziokwu ahụ bụ na mgbe ọnwa 13 gachara (akwụkwọ ikike afọ 1 gwụrụ), mgbe m na-ese foto ụfọdụ ekwentị kwụsịrị, na-ahapụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ "Apps Watchdog Bark".
Enwekwaghị m nkwa ọ bụla ka m wee mara ma nsogbu a bụ batrị ma ọ bụ ekwentị ahụ, edewo m ya site na ịlaghachi na ntọala ụlọ ọrụ, usoro ahụ malitere mana mgbe awa ole na ole jiri ya, ọ dịkwa ọkụ ọzọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihuenyo pụta ọzọ.
Ọ nwere onye maara ihe ngwọta? zụta batrị ọzọ? ma ọ bụ na ọ ka mma ịzụta ọzọ otu? Kedu ihe ị kwadoro. Daalụ n'ọdịnihu.
Enwere m Lg G3 VS985 4G, na enweghị m ike ịgbalite menu zoro ezo ... kedu ihe ị kwadoro ...?
Zaghachi Bladi Aguiluz
O mere m na ọ bịara "enweghị ike imepụta nchapụta ọzọ n'ihi oke okpomọkụ, gbalịa ọzọ mgbe e mesịrị" na mberede akụkụ azụ ahụ dị ọkụ nke ukwuu wee gabazie !! Ihe ngwọta ya bụ, ọ bụrụgodị na ha echeghị naanị banyere ịgbanwe batrị ahụ! batrị m pere mkpụmkpụ mana ọ rụ ọrụ! O doro anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ọ dị oke ọkụ na mberede na ekwentị m gbanyụrụ ma ị nwere ya reboots! zutara ya ihe mbu! na ugbu a na-enweghị nsogbu ọ bụla ọ na-arụ ọrụ !! LG gwara m na ha na-enwe batrị nsogbu kpo oku! Ọ bụ ezie na ekwenyeghị m nke ọma, nke ahụ bụ ihe ngwọta n'ọnọdụ m!
Zaghachi na mikheas
Ndewo, enwere m lg g3 d850 na achọrọ m ịma n'ihi na ekwentị na-agbanyụ ugboro ugboro, emelitere m ụdị ahụ, agbanwere m batrị ma ọ na-aga n'ihu na-eme otu ihe ahụ mgbe m gbalịrị ịmegharị SIM, ọ na-agbanyụ, ka osi di, n'ọdụ ugbo elu, ọ ga-ano acho, m ga acho ima ma odi uzo ozo
maka lg g3 stylus ọ bụ 3845 # * 690 #
m lg g3 malitere ije nwayọ nwayọ na nke ahụ ka samsung j1 mini mma
Netflix enyeworị ohere ibudata ọdịnaya na SD na eze
Rom kachasị mma nke Rịba ama 5, ọdụ ụgbọ mmiri nke 7 Note maka Samsung Galaxy S6 Edge Plus